Galmudug oo iclaamisay xaalad deg-deg ah iyadoo ay jirto khilaaf siyaasadeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGalmudug oo iclaamisay xaalad deg-deg ah iyadoo ay jirto khilaaf siyaasadeed
October 1, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Madaxweynaha Galmudug Axmed Cucaale Xaaf.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maamulka Galmudug ayaa iclaamiyay xaalad deg deg ah kadib maalmo muran siyaasadeed ah oo u dhaxeeya masuuliyiinta sare ee ku sugan magaalada Cadaado.
Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxweynaha Galmudug, dhammaan deegaanada Galmudug ayaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah muddo saddex bilood ah.
Bayaanka ayaa Madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf ku sheegay in tilaabada loo qaaday si loo badbaadiyo maamulka Galmudug, kaasoo sii galaya khilaaf siyaasadeed.
Asbuucii lasoo dhaafay, qaar katirsan baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in ay xilka ka qaadeen madaxweynahooda, balse Xaaf ayaa ku tilmaamay sheegashadan inay tahay wax aan shaqaynayn oo aan sharci ahayn.
February 19, 2018 Suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha oo kuyaala Muqdisho oo maalintii labaad xiran
March 18, 2018 Ciidamada ammaanka Puntland oo howlgal ka dhan ah kooxaha argagixisada ka sameeyay Boosaaso
September 12, 2017 Askari katirsan ciidanka Puntland oo lagu dilay is rasaasayn ka dhacday gobolka Bari
September 30, 2017 Xaggee marayaa khilaafka Galmudug?
Wasiir Juxa oo shir looga hadlayo arrimo ku saabsan Soomaaliya uga qeybgalay dalka Finland
Ciidamada NISA oo qarax mooto ku fashiliyay gudaha magaalada Afgooye
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada Sirdoonka iyo Ammaanka dowladda Soomaaliya (NISA) ayaa sheegtay in maanta oo Axad ah ay ku fashiliyeen qarax mooto gudaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha NISA ayaa sidoo kale sheegay in [...]
Bosaso-(Puntland Mirror) Puntland sent divisions of maritime forces to the coastal areas of Puntland to thwart acts of piracy, an official said. Mowlid Hassan, an officer within Puntland maritime police forces (PMPF), told Puntland Mirror [...]
Shir lagu dhexdhexaadinayo labo beelood oo ka furmay magaalada Qardho
Qardho-(Puntland Mirror) Shir lagu dhexdhexaadinayo labo beelood ayaa maanta oo Axad ah ka furmay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. Kulanka oo uu martigeliyay Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa ujeedkiisu yahay sidii loo soo afjari lahaa [...]